भगवान् पशुपतिनाथले तपाई हामी सबैको कल्याण गरुन्, हेर्नुहोस् तपाईको यो साता कस्तो छ ? पढ्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भगवान् पशुपतिनाथले तपाई हामी सबैको कल्याण गरुन्, हेर्नुहोस् तपाईको यो साता कस्तो छ ? पढ्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिरर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल माघ २७ गते रविबार नेपाल सम्बत ११३९ सिल्लाथ्व तदनुसार सन् २०१९ फेब्रुवरी १० तारिक शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि विहान १० वजेर २६ मिनेटसम्म उप्रान्त षष्ठी तिथि,रेवती नक्षत्र अपरान्ह ४ वजेर २२ मिनेटसम्म उप्रान्त अश्विनी नक्षत्र,साध्ययोग,बालव करण,आनन्दादियोग प्रवद्र्ध,सूर्य मकर राशीमा,चन्द्रमा अपरान्ह ४ वजेर २२ मिनेटसम्म मीन उप्रान्त मेष राशीमा । प्रातः १० वजेर २६ मिनेटसम्म योगिनी दक्षिण दिशामा उप्रान्त पश्चिम दिशामा,चन्द्रमा पूर्व दिशामा,काल उत्तर दिशामा र पाश दक्षिण दिशामा ।
राहुकालः–अशुभ अपरान्ह ४ वजेर २७ मिनेटबाट ५ वजेर ५१ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–मध्यान्ह १२ वजेर १८ मिनेटबाट अपरान्ह १ वजेर ४१ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य अपरान्ह ३ वजेर ४ मिनेटबाट ४ वजेर २७ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ अपरान्ह ४ वजेर २१ मिनेटबाट ५ वजेर ६ मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५६ मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ४० मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेर १० मिनेटसम्म उद्वेग वेला,८ वजेर १० मिनेटबाट ९ वजेर ३३ मिनेटसम्म चर वेला,९ वजेर ३३ मिनेटबाट १० वजेर ५६ मिनेटसम्म लाभ वेला,१० वजेर ५६ मिनेटबाट १२ वजेर १९ मिनेटसम्म अमृत वेला,१२ वजेर १९ मिनेटबाट १ वजेर ४२ मिनेटसम्म काल वेला,१ वजेर ४२ मिनेटबाट ३ वजेर ५ मिनेटसम्म शुभ वेला,३ वजेर ५ मिनेटबाट ४ वजेर २८ मिनेटसम्म रोग वेला र ४ वजेर २६ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर २८ मिनेटसम्म शुभ वेला,७ वजेर २८ मिनेटबाट ९ बजेर ५ मिनेटसम्म अमृत वेला,९ वजेर ५ मिनेटबाट १० वजेर ४२ मिनेटसम्म चर वेला,१० वजेर ४२ मिनेटबाट १२ वजेर १९ मिनेटसम्म रोग वेला,१२ वजेर १९ मिनेटबाट १ वजेर ५६ मिनेटसम्म काल वेला,१ वजेर ५६ मिनेटबाट ३ वजेर ३३ मिनेटसम्म लाभ वेला,३ वजेर ३३ मिनेटबाट ५ वजेर १० मिनेटसम्म उद्वेग र ५ वजेर १० मिनेटबाट सूर्योदयसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
मेषः– पूर्वान्हमा गरेका काम कम सफल हुनेछन् । काम गर्दा हेलचक्र्याई नगर्नु होला । खर्च विवाद आदिबाट जोगिनु होला । अपरान्हबाट समयमा क्रमिक सुधार आउनेछ । थोरै राहत मिल्नेछ । कार्य लगनशिलता बढ्नेछ । अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ । अरुको भर भने धेरै नपर्नु होला । साँझपख अतिथिको निम्तो आउन सक्छ ।
वृषः– समयको ख्याल राखेर काम गर्नु होला नत्र आएको अवसर पनि गुम्न सक्छ । पूर्वान्हमा व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । मध्यान्ह पछिको समय तपाईको अनुकुल रहने छैन । विभिन्न समस्या आउने छन् । खर्चमा वृद्धि हुनेछ । विश्वासमा धोका हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी घट्नेछ ।
मिथुनः– समग्रमा दिन अनुकुल देखिन्छ । कार्य सम्पादनका हिसावले पूर्वान्ह ठीक देखिन्छ । सहज,सरल तरिकाबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । नोकरी तथा राजनीतिमा सफलता मिल्नेछ । घरको वातावरण त्यति अनुकुल नहुन सक्छ । आपरान्ह आय आर्जनका हिसावले शुभ रहला । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ ।
कर्कटः–पूर्वान्ह भन्दा अपरान्ह काल बढि अनुकुल हुनेछ । कुनै पनि काम गर्दा अलमलमा नपर्नु होला । काममा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन् । साझेदारी काममा लगानी नगर्नु होला । पठन पाठनमा सामन्य प्रगति हुनेछ । तनावमा थोरै कमी आउनेछ । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
सिंहः–सकरात्मक भन्दा नकरात्मक काम बढि हुने देखिन्छ । उपलब्धिका काममा अवरोध आउनेछ । आस्था र विश्वास घट्नेछ । विना उपलब्धिका काममा धन र समय लगानी हुनसक्छ । नकरात्मक सोच बढ्नेछ । मध्यान्ह पछि समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । तनावमा कमि आउनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ ।
तुलाः– विवादको अन्त्य हुनेछ । परिश्रमको प्रतिफल राम्रो निस्कनेछ । लगनशिलता बढाउनु होला गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन । स्वव्यवसायमा उन्नति प्रगतिका सम्भावना बढि देखिने छन् । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । साँझपख केहि नयाँ योजना अगाडि आउने छन् ।
वृश्चिकः– दुविधामा नपरि काम गर्नु होला अवस्य गरेका कामबाट लाभ लिन सकिनेछ । पढाई लेखाईका कारण टाउको दुख्नेछ तर प्रगति हुनेछ । सहयोग गर्ने टाढा हुनेछन् तर आफैबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । साना साना काम सम्पन्न गर्न पनि धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित मुनाफा लिन सकिनेछ ।
धनुः– भावनामा बगेर कुनै काम नगर्नु होला । लेनदेन कारोवारमा विवाद पर्न सक्छ सचेत रहनु होला । शरीरिक एवं मानसिक शिथिलता बढ्नेछ । अरुको काम गरेर जश पाईने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन । पढाई लेखाईबाट सन्तुष्टि मिल्ने छैन । सहयोगी धेरै हुने छैनन । आन्तरिक कुरा नखोल्नु होला ।
मकरः–प्रातःकालमा गरेका धेरै जसो काम सफल हुनेछन् भने अपरान्ह पछिको समय भने त्यति अनुकुल हुने छैन । मनमा अशान्ति बढ्नेछ । काम गर्ने उत्साहामा कमी आउनेछ । काम अनुसारको दाम हात पार्न कठिन होला । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । विश्वास र भरोसा टुट्न सक्छ । पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् ।
कुम्भः– समयको गति सगै काममा प्रगति हुनेछ । लेनदेनका विषयमा भने सचेत हुन आवस्यक देखिन्छ । लगनशिलता बढ्नेछ । प्रतिद्वन्दी आफै पछाडि पर्ने छन् । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । सामान्य खालको सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा सुधार आउनेछ । साँझपख केहि नयाँ कामको योजना बन्ने छ ।
मिनः– पूर्वान्हमा गरेका काम सफल हुनेछन् । अपरान्हबाट समयले कम साथ दिनेछ । समयको ख्याल राखेर काम गर्नु होला । अलमलमा गोलमाल हुनसक्छ सचेत हुनु आवस्यक छ । नोकरी तथा राजनीतिमा सोचे जस्तो सफलता मिल्ने छैन । आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति कम होला । रमाईलोमा भुल्दा उपलब्धिका काम हिड्ने छन् । व्यापार व्यवसायमा मन्दि लाग्न सक्छ ।